`अदुवा´ औषधिय गुणले भरिपुर्ण जडिबुटी यस्तो छ अदुवा सेवन गर्नुका सात अचुक फाईदाहरु ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / `अदुवा´ औषधिय गुणले भरिपुर्ण जडिबुटी यस्तो छ अदुवा सेवन गर्नुका सात अचुक फाईदाहरु !
`अदुवा´ औषधिय गुणले भरिपुर्ण जडिबुटी यस्तो छ अदुवा सेवन गर्नुका सात अचुक फाईदाहरु !
admin May 28, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 96 Views
`अदुवा´ औषधिय गुणले भरिपुर्ण जडिबुटी यस्तो छ अदुवा सेवन गर्नुका सात अचुक फाईदाहरु ! अदुवा भान्समा प्रयोग हुने खाद्यबस्तु हो । यसको सेवनले शरीरका लागि निकै फाइदा गर्छ । अदुवालाई बिभिन्न परिका अचार,मा- सु, चिया तथा तरकारीहरुमा मसलाका रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छ । यति मात्र नभई अदुवा अन्य धेरै फाइदाहरु छन् जुन यश प्रकार रहेका छन्:-
१) रुघाखोकी लागेमा २० ग्राम अदुवाको रस निकालेर २ चम्चा महमा मिलाएर बिहान बेलुका सेवन गर्नाले रुघाखोकीमा आराम मिल्छ । २) बा`न्ता भएमा अदुवा र प्याजको रस समान मात्रामा मिलाएर तीन तीन घन्टाको अन्तरमा एक एक चम्चा खानाले बा`न्ता तथा उ`ल्टी बन्द हुन्छ ।
३) ज्वरो आएमा अदुवा र पुदिना काँ-डा बनाएर सेवन गर्नाले लाभ मिल्छ । अदुवाले मानव शरीरमा रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमता वृद्धि गराइ शरीर स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्दछ । ४) त्यसैगरी अदुवाको रस र मह मिलाई मनतातो पानीसंग पिउनाले दम रोगका लागि फाइदा गर्छ ।
५) श्वास गन्हा`एमा अदुवा र तुलसीको रसमा मह मिलाएर सेवन गर्नाले श्वास गन्हा`उने समस्या बाट मुक्ति मिल्छ । ६) चिसोको कारणले हुने बाथ र कम्मर दुखेमा नियमित रुपमा अदुवाको सेवन गर्नाले लाभदायी हुन्छ । ७) अदुवाको रसमा हिङ्ग मिसाएर खानाले पेट सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
Previous खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई तीन-तीन लाख जरि,वाना,,,
Next हार्दीक बधाई!नेपाली छोरी बनि’न् यूकेमा वकिल !